ग्रहणलाइ छिचाेलेर चम्किएका चन्द्र : सामान्य किसानकाे छाेरादेखि निजी क्षेत्रको नेतृत्वसम्म - Lekbesi Khabar
काठमाडौं : आइतबार बिहान चन्द्रप्रसाद ढकालको लागि उनको जीवनकै सबै भन्दा महत्वपुर्ण र ठुलो सफलता मिल्यो, थोरै मानिसको जीवनमामात्रै आइमिल्ले यस्तो सफलताबाट ढकालको उचाइ अझै चुलिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालले जित हासिल गरेसंगै अब उनी २० औँ अध्यक्ष बन्ने पक्का भएका छन् ।
बाग्लुङको बलेवा, अमलाचौरका जन्मिएका चन्द्रको बाल्यकाल र बिगतको भोगाइ साच्चै पे्रणनादायी र अत्यासलाग्दो पनि छ । एउटा सामान्य किसानको छोराले राजनितिक भन्दा फरक क्षेत्रमा यति ठुलो सफलता पाउनु भनेको चानेचुने कुरा भने पक्कै होइन । सफलताको खुसी आफ्नो बाबुसंग भने बाड्न नपाएका उनको जीवन कथा थाहा पाउन विगतमै फर्किनुपर्छ ।
अब प्रस्तुत छ उनको जीवन संघर्षको कथा
हामी धेरैलाई थाहा छ आईएमई भने पछि पैसा पठाउने र पाउने माध्यम भनेर तर हामी सबैलाई थाहा नहुन सक्छ आखिर त्यसको अबधारण ल्याउने व्यक्ति को हुन् भनेर आज हामी तिनै व्यक्तिको जीवन संघर्ष र सफलताको बारेमा चर्चा गर्दै छौ ।
चन्द्र ढकालको जन्म बाग्लुङ जिल्लाको साविक अमलाचौर गाबिसमा वडा नं ४ मा बुवा स्व. हिरण्य ढकाल र आमा जानुकादेवी ढकालको कोखबाट विसं २०२२ साल असार ९ गते भएको हो । सामान्य परिवारमा जेठो छोराको रुपमा जन्मीएका ढकालले एसएल्सी सम्मको पढाई मामा घरमा बसेर पुरा गरेका हुन् ।
एसएलसी परीक्षा नजिकिँदै गर्दा ठुलो बज्रपात पर्न गयो । बुवाको निधनले गर्दा उनीमाथि झन् पिडा थपियो । जसको कारण एस्एल्सीमा उनले चाहेको जस्तो नतिजा हात पार्न सकेनन् ।
बाल्यकालमा घाँस दाउरा, मेलापात, गाईबस्तु चराउने कामको अलावा बासबाट बन्ने चित्रा, भकारी, डोको नाम्लो बुन्ने लगाएतका कार्य गरेर आर्थिक उपार्जन गरेको उनको मानसपटलमा ताजै छ । पारिवारिक आर्थिक अवस्था मजबुत भएको भए ति काम गर्नु पर्दैन थियो होला उनी आफ्नो बाल्यकाल सम्झन्छन् ।
पढाईमा मध्यम विद्यार्थीको रुपमा परिचित ढकाललाई एसएलसी परीक्षा नजिकिँदै गर्दा ठुलो बज्रपात पर्न गयो । बुवाको निधनले गर्दा उनीमाथि झन् पिडा थपियो । जसको कारण एस्एल्सीमा उनले चाहेको जस्तो नतिजा हात पार्न सकेनन् । त्यस कुराबाट उनी कहिल्यै पनि बिचलित भएनन् । एसएल्सी उत्तीर्ण गरेसंगै उनी उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि काठमाडौं आइपुगे ।
नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश काठमाडौमा संघर्ष त गर्नु नै थियो । तर उनलाई काठमाडौँमा काका र मामाका छोराछोरी रहेकाले केही सहज भयो । घरबाट पढ्न र खान बस्नको लागि उनले त्यस्तै ३५ सय जतिमात्रै लिएर आएका थिए । त्यही पैसा र उनको लगनशिलताले नै आज उनलार्ई नेपालमा मात्रै नभई विश्वमानै चिनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकमा खरिददार पदमा नाम निकालेर बैकिङ सेवामा प्रबेश गरेका ढकाल अहिले निजि क्षेत्रबाट संचालित बाणिज्य बैकको नै अध्यक्ष छन् जुन कुरा मानिसले जीवनमा विरलै मात्रामा पाउने सफलता हो ।
२०४१ सालमा काठमाडौँ आए पछि मामाका छोराछोरी र काकासंगै बसेर उनले उच्च शिक्षा अध्यायनसंगै सानो तिनो काम पनि गर्न थाले जसले उनलाई काठमाडौँमा पढ्न र बस्न केही सहज बनायो । मैपीमा बसेर आईकम पढ्दै पेप्सीकोला कम्पनीमा काम गर्न सुरु गरेका ढकालले संघर्ष केहो? मात्रै बुझेनन् व्यापार कसरी गर्ने पनि बिस्तारै बुझ्दै गएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक गरेका ढकाल अहिले नेपालका सफल व्यावसायीको सुचीमा अग्रपंतीमा छन् ।
वाणिज्य बैंकमा खरिददार पदमा नाम निकालेर बैकिङ सेवामा प्रबेश गरेका ढकाल अहिले निजि क्षेत्रबाट संचालित सबै भन्दा ठुलाे बाणिज्य बैकको अध्यक्ष छन् जुन कुरा मानिसले जीवनमा विरलै मात्रामा पाउने सफलता हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विशालनगर शाखामा खरिदारको जागिर खाने एक ठिटो २० वर्षमै निजी क्षेत्रकाे सबै भन्दा ठुलाे वाणिज्य बैंकको मालिक बनुन्जेलसम्मको कहानी रोचक छ ।
बैंकको जागिरसँगै ढकालले ठमेलमा कार्गो र मनी एक्सचेन्ज खोलेका थिए । उनले त्यसअघि बैंकहरूले मात्र फाट्टफुट्ट सुरु गरेको रकम स्थान्तरण गर्ने कार्यलाई निजी क्षेत्रबाट संचालित पहिलो मनी एक्सचेन्ज कम्पनीको रुपमा स्थापना गर्न सफल भए । कार्गो व्यापारका सिलसिलामा अमेरिका हिंडेका ढकाल जापान पुग्दा केही समय त्यहीं अल्मलिए । करिब १० महिना उनले त्यहाँ काम गरे । ‘हामी किताबलाई गमले टाँस्ने काम गथ्र्यौ,’ उनी सम्झन्छन् ।
जापानबाट अमेरीका जान भनि हिडेका उनी अन्तत नेपालनै फर्किए र मनी ट्रान्सफर व्यावसायमा लागे । काममा धेरै र भाग्यमा थोरै विश्वास राख्ने ढकालले सफलताको सिढी आईएमईबाटै चढ्न सुरु गरेका हुन् । जसबाट उनको आयआर्जनमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । पछि मनी एक्सचेन्जलाई एक्सप्रेस बनाएर खोलिएको आईएमई मुलुककै पहिलो रेमिट्यान्स कम्पनी बन्न पुग्यो ।
आफ्नो उन्नतिमा एकजना रवि पण्डित नामका भारतीयको योगदान उल्लेखनीय रहेको उनी बताउछन् । ‘ठमेलको मनि एक्सचेन्जको सजावट कलात्मक थियो, एक दिन यूएई मनी एक्सप्रेसका रवि पण्डित त्यहाँ पुगेछन् र आफ्नो कार्ड दिएर सञ्चालकलाई सम्पर्क गर्न त्यहाँका कर्मचारीलाई भनेछन्’ आईएमईको सुरुआत सम्झँदै ढकाल भन्छन्, ‘त्यसपछि उनलाई सम्पर्क गयौँ र पहिले उक्त एक्सप्रेसको एजेन्टका रूपमा काम थाल्यौं ।’
नेपालमा नै पहिलो कम्पनीको रुपमा यस्तो कम्पनी सुरु गरिछाडे, जहाँ दुई खाले जोखिम थियो । पहिलो एक्सचेन्ज दरमा हुने उतारचढाव र दोस्रो हुन्डिवालाहरूको आँखाको कसिङ्गर ।
यही बीचमा उनलाई केही रकम आवश्यक पर्यो । अधिकृतभन्दा तल्लो तहकाले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन पाइन्थ्यो । तर पनि उनले पनि आवेदन दिए । ‘तर मलाई ऋण लिने भए जागिर छाड्न भनियो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘व्यापार राम्रै चले पनि खरिदार पदको जागिर छाड्न पनि मलाई निक्कै गाह्रो भयो ।’ तर उद्यमशील ढकालले अन्ततः जागिर छाड्ने नै निर्णय गरे र पूर्ण रूपमा व्यवसायमा होमिए ।
७/८ महिना यूएई एक्सप्रेसको एजेन्टका रूपमा काम थालेपछि उनले आफ्नै कम्पनी खोल्ने योजना बनाए । र, राष्ट्र बैंकमा निवेदन हाले । यो २०५६ सालतिरको कुरा हो । उनले नेपालमा नै पहिलो कम्पनीको रुपमा यस्तो कम्पनी सुरु गरिछाडे, जहा“ दुई खाले जोखिम थियो । पहिलो एक्सचेन्ज दरमा हुने उतारचढाव र दोस्रो हुन्डिवालाहरूको आँखाको कसिङ्गर । ‘मार्छु नै भनेर पनि लागेका थिए तर हिम्मत हारिएन र गर्न सकियो,’ उनी भन्छन् । विदेशमा पैसा बुझाएको केही समयमै आफन्तले पाउने द्रूत सेवा नै उनको व्यवसाय विस्तारको अस्त्र बन्यो ।
पहिले पनि रेमिट्यान्स सेवा केही बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मनी ट्रान्सफर कम्पनीले दिइरहेकै थिए । तत्काल रकम दिन उनले थालेको कम्पनीलाई विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावको जोखिम थियो । ‘त्यो जोखिम बहन गर्न सक्नु पनि उनी टिकिरहनु र अगाडि बढन सक्नुको कारण हो,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व अधिकारीको भनाइ छ ।
‘रेमिट्यान्स भनेकै आईएमई’ भनेर ब्रान्डिङ गर्न भ्याएका ढकाल कम्पनी सुरु गर्दाका दिनताका कहिले मलेसिया त कहिले गाउँ डुलिरहेका भेटिन्थ्ये । देशैभरि नेटवर्क बनाउन सुरुका दिनमा कठिन थियो । आफ्नो व्यावसायको बारेमा बुझाउन सुरुमा आफुलाई निकै मिहेनत गर्नु परेको उनी सम्झन्छन् । जुन अहिले सम्भव भइसकेको छ । अहिले उनको कम्पनीको सञ्जाल नेपाली पुगेका प्रायः सबै देशमा छ । यति मात्रै होइन, मलेसियाबाट बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सजस्ता देशमा पनि त्यहाँको आईएमईबाट रकम पठाउने सेवा दिइएको छ । रेमिट्यान्स मार्फत भित्रने रकमको करिव २५ प्रतिशत रकम आईएमईमार्फत आउँछ ।
व्यावसायलाई बढाउने क्रममा २०६३ सालमा क्षेत्रीय स्तरको बैकको रुपमा स्थापना गरेको ग्लोबल बैंकलाई पनि उनले आज नेपालको उत्कृष्ठ बैकको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । उनले ग्लोबल बैकलाई राष्ट्रियस्तरको बैक मात्र बनाएन् सबैभन्दा बढी वित्तीय संस्था गाभ्ने कम्पनीका रूपमा समेत उभ्याए ।
‘सुरुमा काठमाडौंमा मलाई साइकल चढेर हिडेको देख्नेहरूले गाडी चढेको देख्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्छन् तर म जस्ताको त्यस्तै छु ।’
उनको समुहले आईएमई फाइनान्स पनि खोलेको थियो तर पछि राष्ट्र बैंकले एकै समूहको धेरै संस्था नखोल्न अनौपचारिक आग्रह गरेपछि सो लाई गाभेर ग्लोबल आईएमई बैंक बनाए ।
ढकाललाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार उनी काम अनुसार रहेक दिन बिहान सबैतिर फोन गर्न भ्याउँछन् । उनी आफूलाई सम्झिन्छन्, ‘सुरुमा काठमाडौंमा मलाई साइकल चढेर हिडेको देख्नेहरूले गाडी चढेको देख्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्छन् तर म जस्ताको त्यस्तै छु ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष समेत रहेका ढकाल आफुले जस्तो सुकै व्यावसायिक सफलता प्राप्त गरे पनि आफ्नो धरातललाई कहिल्यै नभुल्ने बताउछन् । उनी भन्छन् मेरो आधार भुमी भनेकै बाग्लुङको अमलाचौर हो त्यसैलाई भुल्ने हो भने मेरो अस्थित्व कहाँ हुन्छ र ?
दुई छोरा र एक छोरीका पिता ढकालको उन्नतिमा उनका भाइ रामुको ठुलो योगदान छ । दाजु भाईको संघर्ष र परिवारको समेत साथले आफु आजको यो स्थानसम्म आउन सफल भएको ढकाल बताउछन् ।
‘इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस’ (आईएमई) झन्डै सबै नेपालीको घरसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिइसकेको छ । अहिले पनि पैसा पठाउनु भनेको आईएमी गर्नु हो भनेर बुझ्ने मान्छे धेरै छन्
व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रै नाम कमाइसकेका ढकाल अहिले सर्वसाधारणबीच पनि राम्रैसंग चिनिएका छन् । त्यसो त, उनलाई व्यवसायमा फड्को मार्न सबैभन्दा सहयोगी बनेको ‘इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस’ (आईएमई) झन्डै सबै नेपालीको घरसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिइसकेको छ । अहिले पनि पैसा पठाउनु भनेको आईएमी गर्नु हो भनेर बुझ्ने मान्छे धेरै छन् जुन कुरा ढकालको मेहनत र लगनशिलताको प्रतिफल हो ।
नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानबाट पटक पटक विभूषित भईसकेका ढकालले सामाजिक कार्यमा समेत आफुलाई उभ्याउन सफल भएका छन् । उनी विभिन्न व्यावसायिक सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा समेत रहेका छन् । उनको ग्रुपले अहिले चन्द्रागिरी केवलकार, अटोमोबाइल, ब्याङ्किङ र बित्त, उर्जा, पर्यटन, जस्ता विविध क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।
१४ मंसिर २०७७, आईतवार ०९:११ November 30, 2020
चन्द्र ढकाललाई उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बन्ने बाटाे खुल्याे